Somaliland: Warbixin BBC du ka diyaarisay Sicir bararka maceeshada oo cidhiidhi geliyay nolasha dadka danyarta ah iyo wax ka qabasho la,aanta Xukuumada | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Mudo hada sanad iyo dheeraad ah waxa is soo taraysay qaylo dhaanka ka imanaya shacbiga Somliland gaar ahaan dadka danyarta ah. Xukuumadu waxay ku faantaa inay sarifiikii doolarka ee halka doolar 10 kun kor u dhaafay ay ku soo celisay 8 kun. Hase yeeshee waxay dhagaha ka furaystay dhibta ay keentay doolarkaas hoosta loo dhigay oo faaido weyn u noqday gancsatada dhibaatana ku haya shacbiga. Hadaan tusaale u soo qaadano markuu halka dollar ahaa 10 kun. hadii aad Somaliland shilling wax ku iibsanaaysid wax lagaa rabay inaad bixisid 10 kun ama hal doolar. Hada wixii halka doolar ahaa ahaa ee u dhigmayey 10 kun, waxa lagaa rabaa in laguugu qiimeeyo Somaliland shilling oo lagu leeyahay bixi 10 kun halkuu dollar ka la mid noqon lahaa oo 8 kun lagaa doonin lahaa. Markaa wixii 10 doolar oo dhigmi jiray 20 kun oo Somaliland shilling ah hada waxa lagaa rabaa inaad bixisid weli 20 kii kun oo u dhigmaya 12 dollar. Daawo warbixintan iyo hadalka ka soo yeedhay wasiirkii ganacsiga oo eeda dusha u xanbaariyey dadka shacbiga halkii uu odhan lahaa waxbaa ka qabanaynaa ganacsatadan uu eeda u jeedin lahaa sicir bararka iyagu ka masuulka ah.